Mr. Qaaxo oo Buundhidii ka Soo Baxay, Daaroodna Dabo Fadhiya, Misna Hoosna Dab Kaga Shidaya Gabalada Puntland – Rasaasa News
Oct 30, 2009 Mohamed Ismaciil, Puntland, Qaaxo
Qalbi iyo quulb kala jirtuu Eebe qoonsaday, qadyadii Ogadeen kuwii qaybiyee lumiyey, qalalaase qoon kii dhexdhigay qolada aan sheegan, nimankii qudh gooyada qarsoon jwxo qabadsiiyey, qarin maayo Qaaxiyo qooshay xumo weyne, qadiya oo ka dida qaa,in waa laga qawaafaaye.
Wararka naga soo gaadhaya dalka Newzealand ayaa waxay sheegayaan in Mohamed Ismaciil [Qaaxo] uu mudaba qol ku qafilaa, ka dib kolkii ay dawlada Australia su,aalo ka weydiisay dhaqdhaqaaqiisa iyo lacago la sheegay in wax laga weydiiyey sida ay Akoonkiisa ku soo gashay. Waa markii labaad ee ay booliska Australia waydiiyaan su,aalo la xidhiidha argagixisnimo, shakiga ayaa la xidhiidha, xidhiidh ay xukuumada Eritrea la soo samaysay, taas oo ay Boolisku ka shakiyeen in uu wado arimo ka dhan ah dalka Australia, Qaaxo ayaa hada soo baxay buundhi uu ku jiray, waxaana uu u socdaa baa la leeyahay arimo lacag uruursi ah oo sharcidaro ka ah dalka Newzealand.
Qaaxo, oo ka mid ah afarta dambiile ee loo haysto dilkii Dr. Mohamed Sirad Dolal, ayaa waxaa u dheer isaga hadalo deelqaaf ah oo uu ugaystay beesha uu ka soo jeedo Dr. Dolal, hadalkaas oo ahaa “reer warfaa waxaan u qabanaynaa 3 bilood” “Dolal kama fiicnayn dadkii la laynayey” hadalo noocaas ah oo aad u badan ayaa Qaaxo loo tirinayaa.
Wararku waxay sheegayaan in uu si laciifnimo ah uga codsaday Jaaliyada Somalida ah ee Wellington iyo Hamilton in ay u qabato shir 8 October 2009, uu ku doonayo in uu lacag magaca Jwxo oo been ah kaga uruursado dadweynaha Somaliyeed ee Qaxootiga ku ah dalkaasi. Labadan magaalo ayaa waxaa ku yaal sida la sheegay labo Jaaliyadood oo ku kala magacaaban Jaaliyada Isaaqa iyo mida Daaroodka, warar hoose ayaa waxay sheegayaan in Maxamed Ismaaciil [Qaaxo] uu iimaan xumo daraadeed si aan is ogayn u kala balansaday labadaas Jaaliyadood oo ay xurgufi dhextaal.
Maxadaxda labada Jaaliyadoo ayey mid waliba hool u soo qabatay kolkii la iswaraystayna waxaa la ogaaday in uu labada Jaaliyadoodba balansaday, halkaasna waxaa ka taagan muran u dhaxeeya labada Jaaliyadood waxaana suurto gal ah in aan shirba loo qabanin, waayo hanaanka uu ku socdo ayaa ah baa,bul khayaano.
Hadaba, waxaanu u sheegaynaa dhamaan dadweynaha Somaliyeed gaar ahaana, dadka yar ee ka soo jeeda Somalida Ogadeeniya in ayna siin wax soo dhaweyn ah, maadaama uu Maxamed Ismaaciil [Qaaxo] yahay gancan ku dhiigle, ka qaybqaatay dilkii halgame Dr. Mohamed Siraad, oo sanadkan bilowgiisii si shirqool ah loogu dilay gudaha Ogadeeniya. waxaa kale oo aan dadweynaha u sheegaynaa in ayna jirin wax hawlo jabhadeed ah oo uu ku jiro Qaaxo, laakiin uu dhaqaale ku samaysanayo magaca halganka.
Mohamed Ismaciil [Qaaxo], waxaa uu ka mid yahay raga yar ee ka shaqeeyey in halganka Somalida Ogadeeniya uu salka dhulka ku dhufsado, isaga oo aan la garanaynin waxa ay ka faa,iidayaan.
Qaaxo iyo kooxdiisu waxay hada aad ugu hawlan yihiin sidii ay isaga horkeeni lahaayeen dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo kuwa ku nool Puntland, ujeedaduna waa in ay bulshada Ogadeeniya u sii indha duubnaato iyaga, waayo kolka ay colaadi dhacdo waxaa hadhi hadalhantii iyaga la hadal hayey, waxaana meesha ka soo bixi nacaybkii iyaga loo hayey mid ka cusub oo laggaga jeedsado, waa nidaamkaas nidaamka ay ku shaqeeyaan.
Waxaan xisbaa lahan, khidado noocan oo kale ah oo aad u fara badan oo ay dhigeen, oo iyaga lagaga jeedsaday sida dagaalo xoog leh oo ay galiyeen ciidamada Jabhada oo qaarbadan oo madaxdii Jabhada ahaa ay ku dhinteen dagaal sabab la,aan ah.
Sidaas daraadeed waxaanu u sheegaynaa dadweynaha ku nool labada magaalo ee Hamilton iyo wellington in ayana u samaynin, wax shir waayo maanta waxaa uu ku baryootamayaa Somalinimo, laakiin dhaqaalaha aad siisaan waxaa hubaal ah in uu doonayo in uu ku dhamaystiro guriga qabyada ah ee uu ka iibsaday Nairobi, Kenya.
Waraka Sheegaya in Puntland ay Dad Somalida Ogadeeniya u Dhashay ay Dhiibtay